Onye nkuzi Uche Na-atụgharị uche Rishikesh india | Yoga Onye nkuzi ọzụzụ India
TTC na-atụgharị uche
Nkuzi Onye nkuzi Uche Abia 200
Onye Nkụzi Na-atụgharị uche Uche 500 (India)
Nkuzi Onye nkuzi Uche Abia 100
Ọzụzụ Mmụta Ọzụzụ Ndị Ozi 60 Hour Chakra
Ndụ Ntụgharị Ndụ Ndụ
Sogba egwu Mkpụrụ Obi Uche
Nkụzi Ọzụzụ Ndị Ozi 200 Hour Hatha Yoga
200 Hour Holistic Yoga Onye Ozizi Ọzụzụ
200 Oge Nkụzi Ọzụzụ Onye Ozizi Yoga na-agbanwe XNUMX
200 hour Yoga Onye Ọzụzụ Ndị nkuzi Rishikesh
100 Hour Holistic Yoga Onye Ozizi Ọzụzụ
Oge nkuzi Ọzụzụ Ndị nkuzi Yoga na-agbanwe 100
Nkụzi Ọzụzụ Ndị Ozi 300 Hour Yoga
Holistic Yoga agbahapụ
Yoga ekeresimesi na ntụgharị uche
Yoga Nidra Onye nkuzi nkuzi Rishikesh India
150 Hour Advanced Yoga Nidra Onye Ozizi Ọzụzụ
Nyocha Nkụzi Ntụgharị Uche
Nyocha Ọzụzụ Ndị Ozi Yoga
Nyocha Yoga Nidra
Banyere otu egwuregwu Yoga
Banyere Yoga edemede mkpa Rishikesh
Nkpuru nke Yoga
Njikere nke edemede
Gbanwee Ahụ Gị-Nkuzi-Mind-Obi
Weta Nzube, Nzube na Udo n’ime Ndụ Gị
Nweta Eziokwu dị mkpa nke Yoga, Ntụgharị uche na Yoga Nidra
Nnọọ na Yoga Essence Rishikesh na nzọ ụkwụ nke Himalayas iji nweta ezi ọdịdị nke Yoga, Ntụgharị uche, Yoga Nidra na Mgbanwe Ndụ site na nkuzi nkuzi asambodo mba ụwa dịka:
Onye nkuzi ntụgharị uche 100 hour India
Nkuzi Onye Nkuzi Uche 200 hour Rishikesh India
200 Hour Yoga Nidra Onye nkuzi Ọzụzụ India (Level-1,2,3)
200 Hour Hatha Yoga Onye nkuzi Ọzụzụ Rishikesh India
200 Hour Holistic Yoga Onye Ozizi Ọzụzụ Rishikesh India
200 Hour Transformal Yoga Onye Ozizi na-azụ India
300 Hour Yoga Onye Ozizi ọzụzụ Rishikesh India (Advanced)
Mmụta Ahụmahụ & Ndụ-Ngbanwe
Nwee ọ Joyụ nke ibi ndụ dị mma
Agụmakwụkwọ Ọzụzụ Nkụzi na Ntụgharị Uche Rishikesh India
Mara otu esi emezi Ahụ-Mind-Obi, Otu esi achọpụta akụkụ zoro ezo nke ndụ, Mụta nkà ịkụzi Ntụgharị uche site na isonye na nkuzi nkuzi nkuzi.
Nkuzi Onye nkuzi Yoga Rishikesh India
Nweta ezi mkpụrụ nke Yoga na ntụgharị nke ndụ, nweta ahụmịhe nke ịdị ndụ dị ndụ, mụta nkà ịkụziri Yoga site na isonye na nkuzi nkuzi Yoga.
Yoga Nidra Onye nkuzi nkuzi Nkuzi Rishikesh India
Nwee ahụmịhe dị omimi na ezumike, mụta usoro nke usoro iji kuzie yoga nidra, Mara otu esi emezi Ahụ-Mind-Obi site na isonye na nkuzi nkuzi nkuzi Yoga Nidra.
Ka yoga na ntụgharị uche anyị
Nkuzi akwukwo ghagharia ndu gi
Yoga Essence Rishikesh bụ ụlọ ọrụ na-anaghị akwụ ụgwọ yana ụlọ akwụkwọ yoga edepụtara nke Yoga Alliance (RYS), na Yoga Alliance na-aga n'ihu Onye Na-ahụ Maka Nkụzi (YACEP). Anyị raara onwe anyị nye ịgbasa ihe ọmụma na sayensị nke yoga, na-atụgharị uche n'ụdị ya dị ọcha ka anyị na-ebugharị ọ joyụ, udo, nkwekọ na nha nha. Anyị na-enye mmụta, ahụmihe niile, na mgbanwe mgbanwe nke omume yogic dị iche iche site na ụdị nkuzi nkuzi dị iche iche.
N’iburu n’uche di nkpa anyi n’enyefe ndi anyi ihe n’emebe ezigbo ahuma, anyi n’enye otutu nkuzi ka o baara ndi mmadu nile uru.
100 awa Onye nkuzi Ntụgharị Uche
200 awa Onye nkuzi Ntụgharị Uche
Akwukwo nke Onye nkuzi nkuzi 500 di elu
200 awa Yoga Nidra Onye Ozizi Ọzụzụ (Level I, II, III).
200 awa Hatha Yoga Onye Ozizi
200 awa Holistic Yoga Onye Ozizi
Oge 200 nke nkuzi nkuzi Yoga na-agbanwe agbanwe.
Usoro nkuzi anyi jikọtara nghọta na omume nke ọtụtụ ndị isi mgbe ochie na nke ugbu a iji lebara uche, ibi ndụ, okwu metụtara ụmụ nwoke ugbu a ume mgbe a na-agba ụmụ akwụkwọ ume ka ha wuo ntọala siri ike maka udo nke ime, nnabata, ịmata onwe onye.
A na-ezizi nkuzi anyị n'ụzọ ezumike na ọ joyụ nke mere na usoro mmụta na ngbanwe niile agbakwunyerela mgbe ị na-etolite ala na ntọala siri ike iji nweta ahụmịhe bara ụba nke aka asatọ nke yoga, dị ka Rishi Patanjali gosipụtara na mbụ. A na-akuzi omume anyi nile site na ijikota ma isi edemede nke sayensị yogic oge ochie na sayensị ogbara ohuru iji mee ka o mezue, usoro, ma dikwa na ndu ohuru anyi.
Maka inweta ihe omuma banyere ihe omuma nke isi anyi banyere ime yoga, biko lee ihe banyere blọgụ blọọgụ gbasara ihe anyị kwenyere na ọ bụ ezigbo ọcha nke yoga.
Ike nke Yoga mkpa niile, Rishikesh na ewepụtara maka inye ahụmịhe kachasị mma na akụkụ niile iji kenye yoga dịka ụzọ ndụ. A zụlitere nkuzi anyị, ebe obibi anyị, nri anyị, yoga na ebe ntụgharị uche ya na ezi mmekọrịta dị egwu iji mezuo isiokwu ya dị mkpa nke inye ụmụ akwụkwọ akụkụ nke omume yogic na akụkụ mgbanwe nke ndụ.
Anyi bu ashram n’obi anyi ma kwenyere n’inye ashram nke dikariri ka ebe obibi n’enye ndi umu akwukwo ohere inyocha ihe ha n’ime, uche ha na nkpuru obi ha. Ndị otu na-anabata ezinụlọ dị ka ndị ezinụlọ na-adị njikere mgbe niile iji nyere gị aka ma kwado mmepe gị na-eto eto ma mee ka ị nwee mmetụta n'ụlọ mgbe ịnọ.
Yoga Essence Rishikesh na-enye ebe obibi dị ọcha ma dị ọcha ma dịkwa mma maka ọnụnọ gị n'oge ọzụzụ. Schoollọ akwụkwọ anyị dị na udo dị jụụ, Lakshman Jhula, nke dị narị kilomita 200 site na osimiri Ganga. Ugwu Himalaya gbara ya gburugburu na ahihia ahihia gbara ya gburugburu. Ọmarịcha ugwu ndị a na oke ikuku na-enye ume ọhụrụ na-abịa site n'akụkụ Ganges na-enyere ndị sonyere aka maka ntụrụndụ ebumpụta ụwa na ọgụgụ isi.
Ime ụlọ anyị nwere arịa ọgbara ọhụrụ dị ka ime ụlọ ịwụ, mmiri na-ekpo ọkụ na oyi, ụlọ ikuku, ụlọ Wi-Fi, mmiri ọ drinkingụ drinkingụ, wdg.
Samyak Aahaar- nri ziri ezi ma guzozie eguzozi bụ akụkụ dị mkpa nke omume yogị. N'ihi ya, anyị na-enye ụdị nri dị ụtọ, nke na-enye nri, nke esiri esi nri ọhụrụ iji mee ka ahụmịiko ahụ na-atọ ụtọ. Ọtụtụ ihe oriri bụ usoro nri ọdịnala ewu ewu sitere n'akụkụ dị iche iche nke India. A na-eme nri ndị ahụ n'ụzọ dị nro na nnukwu ịhụnanya site n'aka ndị osi nri nwere ahụike sitere na mpaghara Himalayan.
A na-edobere ngwa nri niile, dị ka inine, mkpụrụ osisi na ihe ndị ọzọ, kwa oge na mpaghara maka ezigbo ahụ ike. Ihe oriri anyị nwere njikọ nke pụrụ iche nke ọdịnala yogiki, uru ahụike na ọgwụgwọ ọgwụgwọ nke nri Ayurveda & eke, yana uru nri dị mma.
Okwu si n'obi ụmụ akwụkwọ anyị
Tinyegharịa Obi, Ahụ & Mkpụrụ Obi Gị
Nyocha vidiyo nke Yoga TTC & Yoga Nidra TTC
Nyocha vidiyo nke TTC na-atụgharị uche
Kedu ihe kpatara Mụta Yoga ma ọ bụ nkuzi Onye Ozizi ntụgharị uche na India
Mezie Uche Gị, Ahụ́ Gị na Mkpụrụ Obi Gị
INDIA na Yogic ike ubi. Ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ puku afọ iri, ndị na-achọ ihe eruwo na njedebe zuru oke nke mmụọ ebe a. Dị ka ọ na-adịkarị, ọ mepụtara nnukwu ume ọrụ gburugburu mba ahụ. Mkpọtụ ha ka dị ndụ, mmetụta ha dị na ikuku; just chọrọ ikike nghọta, ikike ụfọdụ ịnata ihe a na-anaghị ahụ anya nke gbara obodo a gburugburu dị anya. Mgbe ị na-eme ọzụzụ nkuzi na nkuzi onye nkuzi Holistic Yoga ebe a, ị na-ahapụ ezigbo India, ala nke njem ime ka ịkpọtụrụ gị. Ọ bụ ebe niile, ebe ịchọrọ ị bea ntị! Nwee uche! Njikere!
RISHIKESH bụ ntinye banye na Himalayas miri emi - ọtụghe-ụzọ nye ndị na-achọ ibanye miri n’ime njem nke ime ha. A maara ya dị ka "Tapo-Bhumi" nke pụtara ebe omume yoga na ntụgharị uche nke ọtụtụ sages na ndị nsọ kemgbe oge ochie. Puku kwụrụ puku sng na ndị nsọ eletala Rishikesh ka ha tụgharịa uche n’achọ ihe omimi di elu na nnabata onwe. Ogige ike yog na ike ime mmụọ nke ala a na-eme ka njem ime anyị dị mfe. Muta ihe banyere njem ime ayi na nkuzi mgbanwe dika Ulo nkuzi nkuzi yoga anyi na nkuzi nkuzi abuo.
G ISN IS B SO EGO NA-EKWU EGO
Na Yoga Essence Rishikesh, anyị na-etinye uru pụrụ iche na nnwale yoga, yoga nidra na ntụgharị uche. Kama ilekwasị anya naanị na ihe ọmụma na teknuzu nke omume anyị na-akụzi, anyị na-enyere ndị ụmụ akwụkwọ aka ịzụlite nghọta ọhụrụ maka ndụ udo, ọ joyụ na nkwekọ ka ha wee nyefee ndị ọzọ nghọta ndị a.
Schoollọ akwụkwọ anyị bụ ebe obibi nye ndị na-ahụ n'anya yoga si gburugburu ụwa bụ ndị kpọrọla mmemme anyị “ezigbo mgbanwe ime mmụọ na ndụ”. Nke a bụ n'ihi na anyị na-akpachapụ anya ịnye ohere, nke ọma, yana ịnabata ụmụ akwụkwọ iji rụọ ọrụ miri emi n'usoro nke Ahụ-Breath-Mind-Heart maka mgbasawanye.
Yolọ akwụkwọ yoga anyị nwere ezigbo ọkaibe na omume yogadi dị elu dị ka yoga nidra, ntụgharị uche, chakra, kundalini na ahụ aghụghọ. Wezuga usoro nkuzi nkuzi yoga anyị, anyị na-enye yoga nidra nkuzi nkuzi, yoga nidra onye nkuzi nkuzi (ọkwa 1, ọkwa 2, ọkwa 3), nkuzi nkuzi nkuzi (100, 200, 500), na ndị ọzọ.
Ọzụzụ Ndị nkuzi Nkụzi anyị dị narị abụọ na narị abụọ na oge nkuzi 200 Hour na-enwe ọzụzụ pụrụ iche karịa nkuzi ndị nkuzi yoga ndị ọzọ n'ihi na anyị na-enye ọzụzụ nkuzi ndị nkuzi Yoga Nidra ọzọ (yana asambodo) nke na-enye ụmụ akwụkwọ anyị aka inyere ndị nwere omume yogya aka dị elu.
Ndụ transformal na ihe ọmụmụ na nkuzi sayensị.
Naanị ụlọ akwụkwọ dị n'India na-enye ọzụzụ nkuzi Yoga Nidra dị elu
Usoro na omume dị iche iche kpuchie ọdịnala yog na ụzọ dị iche iche
Ndị otu egwuregwu Yoga
Enweghachi Mind, Ahụ & Mkpụrụ Obi
Ndu itationghachinuche na Onye nkuzi Yoga Nidra
MAKA ỌMARA MARA NA MAKA EDKPEDTA NKWUKWU EGO NA-EGO
Dịka onye nkuzi Yoga, ahọpụtara m ịgbaso ọzụzụ nkuzi onye nkuzi awa 200 na Yoga Essence Rishikesh n'ihi na m chọrọ ịmụ na ahụmịhe usoro mmụta dị iche iche na ọzụzụ a na-enye usoro dị iche iche karịa ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ. Ọbụghị naanị na ahụrụ m ma mụta ọtụtụ ụzọ ịtụgharị uche dị iche mana kamakwa ọ ghọrọ usoro gbanwere ndụ m. Enwere m ọ joyụ na ịdị jụụ n’ime onwe m; o meela ka njem nke m dị omimi hụ onye m bụ n'ezie. Obere ìgwè nke ihe omume ahụ mere ka anyị nwee ike iso ndị klas anyị na-akpachi anya ma mee ka o kwe ndị nkụzi dị mma ike inye ndụmọdụ nkeonwe. Ndị nkuzi ahụ na-ebi ndụ ha na-akụzi ma ugbu a amatakwuola m ihe ịbụ yogi. Ugbu a amatala m otu m si chọọ iji ọ ofụ dị ukwuu, ịgụ abụ na ịgba egwu yoga n'obodo m. Enwere m ike ịkwado mmụta na ụlọ akwụkwọ a. Obi dị m ụtọ na m gbasoro ya. Namaste! Mario.
Ekpesara m ya, m gụrụ ya ma mụta ịhụ ndị ọzọ n'anya
Ahụmịhe m nwetara / Yoga Essence Rishikesh site na isonye na usoro ọzụzụ nkuzi Yoga dị narị abụọ, enweghị ike ịkọwa ya n'okwu. Ọ bụ ahụmahụ anwansi banyere ndụ, uche, anụ ahụ na mkpụrụ obi. Maka otu ị ga-esi banye nke dị omimi na otu esi abanye n'ime ntụgharị uche, yana otu esi ahapụ. Ikwesiri inwe mmetuta ya, igosiputa ya, igosiputa ya, iteghari egwu, ibe akwa, ichi ochi, mawa elu, i ghota ihe Swami Samarth na-anwa iweta. Enwere m ihe ọma na abụwo m otu n'ime ụmụ akwụkwọ ya n'ihi na ọ bụrụ na ịchọrọ ịbụ onye nkuzi yoga, ịkwesịrị ibu ụzọ nyere onwe gị aka, iji nyere ndị ọzọ aka. Kedu ka ị ga - esi mee ka ndị ọzọ dị jụụ, ma ọ bụrụ na ị kwụghị onwe gị? Achọpụtara m onwe m, agbanweela onwe m ma mụta ịhụ onwe m na ndị ọzọ n'anya n'eziokwu. Na mkpokọta Ana m enwe ekele maka ihe m na-enweta na Yoga Essence. Ama m na nke a bụ mmalite m na njem yoga, mana nnabata a bụ nke M, o nwekwara nnukwu mmetụta na ịmara ihe dị m n'ime na etu m ga-esi banye yoga na ntụgharị uche. Daalụ Namaste!
NSOGBU NKE EGO NA NKWUKWU EGO
Yoga Isi Obodo nke India, Rishikesh Enwere m ike ịnweta ụdị yoga site na ịdenye aha na nkuzi nkuzi Yoga na 200 awa na Yoga Essence, Rishikesh n'okpuru nduzi ịhụnanya nke Swami Samarth. Otu mba nwere ọ friendlyụ na nkwado mgbe ọ bụla nke Joy, Anoop, Dhiraj, Ranjan, Prasad nwere ike ime ka nkuzi nkuzi yoga ruru narị abụọ dịka ọfụma nke Ganga Chineke anyị mara mma. Enwere m mmetụta na enwere m ihe ùgwù ebe ọzụzụ ahụ karịrị ihe m tụrụ anya ya. Azụ usoro ejikọtara ọnụ na-enweghị izu izu bụ ebumnuche nke idobe ike otu iji mezuo ugboro mgbanwe n'ogo nke otu onye wee chee na ọ bụ nzube nke ụlọ akwụkwọ ahụ. Na ngwụcha nke usoro ahụ yana Asambodo, anyị nwere ike ịnweta 'ahụmịhe transcend' nke uto n'ime ime site n'ọtụtụ ntụgharị uche dịka ezigbo iwepụ onyinye. N'uche m "Mgbe ọ gachara naanị aka mbụ, onye sonyere nwere ike ịbụ ezigbo onye nkuzi" bụ ntọala nke ọzụzụ nkuzi kacha mma Yoga na Essence Rishikesh. Ekpesiri ekpere m ike maka uto ahụike dị nsọ na ndị na-esonye na ụlọ akwụkwọ ahụ. Enweela m ụgwọ maka ndị otu ahụ niile maka ịhụnanya ha na nkwado ha n'oge ọnụnọ m niile. Pranam, Ihunanya
AKW TRKWỌ EGO, ANDB ANDR AND NA REB RER EX AH EXMAT.
Ntughari m nwetara n’oge m nọ na-amụ na Yoga mkpa dị mkpa na-agbanwe ndụ. Mgbe m jesịrị ụwa niile maka ụlọ akwụkwọ kwesịrị ekwesị / Ashram / agụmakwụkwọ maka mmepe nke njem m, enwere m obi anụrị na achọtara Yoga mkpa. Gburugburu ụlọ akwụkwọ ahụ dị ịtụnanya, dị ọcha ma nwee ezigbo ume. Akụkụ kachasị mma bụ otu na njikwa ụlọ akwụkwọ, nke dị njikere mgbe niile inye aka. Uzo ndi akuziri na Yoga Essence bu otutu nwere otutu ma na agbanwe agbanwe. Swami Samarth Ekwesịrị m ikwu na ị bụ onye nkụzi dị ịtụnanya na akụkụ kachasị mma bụ ihe ị na-akụzi, ị na-ebi. Ahụmịhe gị na nghọta gị na-enwusi ike ma ejiri m obi m niile kwere na Yoga Essence ga-arụ ọrụ dị ịtụnanya n’ọdịnihu. Ekwesịrị m ịgbakwunye na ndị otu gị gụnyere Joy, Prasad, na Ranjan dị ịtụnanya na ụmụ nwoke ndị a niile jupụtara n'ịhụnanya, udo na nkwekọrịta. Oge nkuzi nkuzi nkuzi nke awa 200 na-emezu atụmanya m niile m na-achọ. Ọdịnaya dị na usoro ahụ na-emetụ akụkụ dị iche iche nke usoro ntụgharị uche uche na-enye ume ọhụrụ ma ọ na-emezu atụmanya nke onye na-achọ.
Ọ BANT Ọ B FRANT ANTBARA EPKW BYKW BYKW BYKW BYKW BYKW BYKWUP BYTARA
Nkuzi Onye nkuzi Yoga Nidra bụụrụ m ihe ịma aka na mbido n'ihi nrụgide na nchekasị m nwere na-aga ezumike miri emi ma hapụ ya aka. Mana ka ụbọchị na-aga, Aghọtara m ihe kpatara nsogbu nke nsogbu m wee banye na omume ahụ, enwere m ike ịhapụ ha n'ihi nnọkọ Yoga Nidra na omume ntụgharị uche siri ike. Ọ bụ ahụmarịcha ahụmahụ iji ghọta, mụta ma nwee mmetụta nke usoro site na usoro nzọụkwụ nke omume yoga Nidra dị ka nyocha Yogic ọdịnala na sayensị sayensị ọgbara ọhụrụ si na Swami Samarth. Ọ bụ ezigbo nguzozi n'etiti omume na-eme yoga na ntụgharị uche. Nkuzi ndi bara uru bara uru ma nyere aka ịbanye n’ime omumu n’otu oge imuta nka ikuziri ha. Ofdị obiọma na ịdị nro n'izi ihe site na ntụgharị uche & yoga ndị nkuzi a nabatara nke ukwuu. Ihe oriri na ndị ọrụ ahụ mara mma nke ukwuu ma nwee omume enyi. Nri dị ụtọ nke ukwuu ma maa mma.
Obi ,ghọta, Uche, Obi & Mkpụrụ Obi
YOGIC MAKA INWETA SILENCE MEDITATION
Nwere ike 3, 2020Nwere ike 5, 2020yogaessencerishikesh
KIRTAN YOGA | EGO KIRTAN
MANTRA YOGA | NWAANYTR MARA
February 11, 2020Nwere ike 5, 2020swamidhyansamarth
Syllabus nke Yogayoga
SYLLABUS OF 200 HOUR YOGA TEACHER AKAINKỌ AKOURKỌ
Nwere ike 28, 2019Nwere ike 28, 2019swamidhyansamarth
Nwere ike 18, 2019February 11, 2020swamidhyansamarth
VIGYAN BHAIRAV TANTRA: Encyclopedia nke Usoro Ntụgharị Uche
Nkpuru nke YogaNtụgharị ucheyoga
Gịnị bụ Raja Yoga? Ntụnyere nke Raja Yoga na Hatha Yoga
April 15, 2019Nwere ike 5, 2020swamidhyansamarth
Yoga mkpa edemede Rishikesh
Nkwari akụ Vishla Palace,
Tapovan Lower (Behind Dewa Retreat),
Email anyị: [Email na-echebe]
Kpọọ anyị: (+ 91) 7409349919 / (+ 91) 8954559984
Nyocha Nyocha Mmụta Yoga
Ọzụzụ Ndị Ọzụzụ Ndị Ozi
200 Hours Hatha Yoga Onye nkuzi Ọzụzụ Rishikesh
200 awa Holistic Yoga Onye nkuzi Ọzụzụ Rishikesh
Oge 200 nke nkuzi nkuzi Yoga na-agbanwe agbanwe
300 awa Yoga Onye Ozizi Rishikesh India
050 Elekere Yoga Nidra Onye Nkụzi Ọzụzụ Ndị Ọzụzụ India (Level- I)
Oge awa 150 Yoga Nidra Onye nkuzi nkuzi India (ọkwa- II na III)
Oge elekere 200 nke nkuzi nkuzi nkuzi Rishikesh India
N'afọ 500, Ntụgharị uche Onye Ozizi Ọzụzụ (India)
Oge elekere 100 nke nkuzi nkuzi nkuzi Rishikesh India
100 awa Holistic Yoga Onye Nkuzi Ọzụzụ
Ntughari ntụgharị uche nke Mgbanwe
08 Days Holistic Yoga agbahapụ
Na-agba egwu Mkpụrụ Obi
YOGIC MAKA INWETA SILENCE MEDITATIONNwere ike 3, 2020
KIRTAN YOGA | EGO KIRTANFebruary 11, 2020
MANTRA YOGA | NWAANYTR MARAFebruary 11, 2020
SYLLABUS OF 200 HOUR YOGA TEACHER AKAINKỌ AKOURKỌNwere ike 28, 2019
EGO NA-EKWU NIILENwere ike 18, 2019
Gịnị bụ Yoga? - Nkà ihe ọmụma ma ọ bụ ịdọ aka ná ntịJuly 10, 2018
AKAKKỌ CHAKRA: Omume ntụgharị uche na ebe isi mmụọ-mmụọApril 14, 2019
Ujjayi Pranayama: Omume Na-eku EkuApril 7, 2019
Yoga Transformal Yoga: Nzọkwa Ọkachamara maka Mgbanwe ahụNovember 16, 2018
NWAANYI PRANAYAMADecember 25, 2018
Yoga Essence Rishikesh © 2019 | Ikike niile echekwabara